🥇 ▷ Apple wuxuu qariyey ukunta fudfudud markuu soo bandhigay iPhone 11 ✅
Apple wuxuu qariyey ukunta fudfudud markuu soo bandhigay iPhone 11
Waxyar ka dib soo bandhigista jiilka cusub ee iPhone, Apple waxay soo saartay warbixin kooban oo laba daqiiqo ah oo ka hadlaysa furaha 2019, laakiin waxaa ka mid ahaa wax lala yaabo: taabasho taabasho ah. ukunta fudfudud, oo ay ogaadeen isticmaale Reddit sida laga soo xigtay Farsamada. Marka, dhexda sawirrada laga soo qaaday bandhigga, kaliya 1:23 daqiiqo oo fiidiyow ah – oo ay horay u arkeen in kabadan 16 milyan oo qof -, kuwii Cupertino waxay si ula kac ah ugu darsadeen Microsoft cabsida laga qabo “Shaashada Buluugga ah ee Geerida” sida uu sheekha u sheegay weedha “PC iibinta ugu wanaagsan”.
Waxaan sidoo kale kugula talineynaa: Kuwani waa qiimaha iPhone 11, iPhone 11 Pro iyo Pro Max ee Mexico
Ukunta Easterku waxay ku dhawaaqeysaa “Khalad 09102019”, iyadoo si cad loo tixraacayo taariikhda ay fure muhiim ah Sebtember 10, iyo, haddii aad khabiir ku tahay lambar labaale, waxaad si fudud u tarjumi lahayd sirta ku qarsoon sawirka. Ama, si fudud u adeegsiga laba-geesoodka beddelka ASCII, sida adeegsiga Reddit Gcarsk uu sameeyay ka dib markii uu qorey dhamman fariinta.
Tani waa fikir uun. Laakiin way fiicnaan lahayd inaad hesho nooc ka mid ah farriinta ugxanta Easter halkan taageerayaasha Apple oo joojin doonta fiidiyowgaSawirka ayaa yidhi.
(Sawir: Apple / YouTube) Kadib markaad qortid dhambaal dhammeystiran:
“01010011 01101111 00100000 01111001 01101111 01110101 00100000 01110100 01101111 01101111 01101011 00100000 01110100 01101000 01100101 00100000 01110100 01101001 01101101 01100101 00100000 01110100 01101111 00100000 01110100 01110010 01100001 01101110 01110011 01101100 01100001 01110100 01100101 00100000 01110100 01101000 01101001 01110011 00111111 00100000
01010111 01100101 00100000 01101100 01101111 01110110 01100101 00100000 01111001 01101111 01110101 00101110 ”
Apple Waxay kuu leedahay wax:
– Marka ma waxaad qaadatay waqti aad ku tarjunto tan? Waan ku jecelnahay ”.
Talaadadii la soo dhaafay, marka lagu daro soo bandhigida iPhone 11, Apple wuxuu sidoo kale shaaca ka qaaday jiilka cusub ee Apple Watch 5, iPad cusub iyo adeegga Apple Arcadian.